NepalManch :: पाकिस्तानमा एकैसाथ महिलाले दिइन् सात सन्तानलाई जन्म
एजेन्सी : चहकिलो यार मोहम्मद को शब्दहरु हुन्, जो एबटाबाद, खैबर पख्तुनख्वा शहरमा सात बच्चाहरुका पिता बने।
उनले भने, “हामी धेरै कठिनाइसँग एबोटाबादमा जिन्ना अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल पुग्यौं, जहाँ अल्लाहले हामीलाई चार छोरा र तीन छोरीहरु दिए। हामी धेरै खुसी छौं।”
यार मोहम्मद बटग्राम जिल्लाका निवासी हो। उनकी श्रीमतीले एक निजी मेडिकल कलेज जिन्ना अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षण अस्पतालमा सात सन्तानलाई जन्म दिएकी हुन्।
अस्पताल स्रोतका अनुसार सबै नवजात शिशु र आमाको अवस्था स्थिर रहेकाे छ।
यी बच्चाहरु भन्दा पहिले, यार मोहम्मद दुई छोरीहरु छन्। “यी बच्चाहरु को हुर्काउन बिल्कुलै गाह्रो हुँदैन किनकि उनीहरु एक संयुक्त परिवारमा बस्छन् जहाँ परिवारका सबै सदस्यहरुले उनीहरुलाई मद्दत गर्नेछन्,” उनी भन्छिन्।
जब असाधारण अपरेशन गर्ने डाक्टरहरु पनि आश्चर्यचकित भए
एबोटाबादको जिन्ना अस्पतालकी स्त्री रोग विशेषज्ञ डा हिना फयाजका अनुसार ती महिला शनिबार पहिलो पटक उनीकहाँ आएकी थिइन्।
उनी भन्छिन्, “अल्ट्रासाउन्ड र अन्य रिपोर्टबाट हामीलाई थाहा भयो कि उनको गर्भमा पाँच बच्चाहरु छन्। लगभग आठ महिनाको गर्भावस्था बितिसकेको थियो।”
डा हिना फयाजले भनिन्,’ म महिलाको रिपोर्ट देखेर स्तब्ध भएँ, महिलाको रक्तचाप एक खतरनाक स्तरमा उचालिएको थियो। उनको पेट फुलेको थियो। यस भन्दा पहिले, उनको शल्यक्रियाबाट दुई बच्चाहरु थिए। उहाँलाई पहिले टाँका भएको ठाउँमा धेरै पीडामा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ गर्भाशय टुटेको र टुट्ने खतरा थियो, जसले महिला र उनीहरुको शिशुको ज्यान खतरामा पार्न सक्थ्यो। ‘
उनी भन्छिन् कि ‘हामीलाई यो पनि खतरा थियो कि महिलालाई पोस्टपार्टम हेमरेज हुन सक्छ, अर्थात बच्चा जन्मे पछि, उनी धेरै रगत बग्न सुरु गर्दिनन्। महिलाको रक्तचाप पहिले नै उच्च थियो। यसले उनीहरुलाई कम्पन दिन पनि शुरू गर्न सक्छ।’
डाक्टर हिना फयाज बताउँछिन् कि उनको ड्युटी त्यो दिन ओपीडीमा थियो। मैले मेरो विभागकी प्रमुख प्रोफेसर डा‍. रुबिना बशीरसँग सम्पूर्ण कुराको बारेमा कुरा गरें।
उनले परिवारको सहमतिमा तत्काल अपरेसन गर्न सल्लाह दिइन्।
अपरेशन को महत्वपूर्ण चरण
डा. हिना फयाज भन्छिन् कि यो अपरेसनमा उनका तीन जूनियर टीएमओ डा. शाहिला, डा मरियम र डा राबिया बाहेक प्यारामेडिक्स र एनेस्थेसियाको डाक्टरहरुले पनि मद्दत गरें।
उनले भनिन्, “यो शल्यक्रिया एक घन्टा सम्म चलेको थियो, तर जब पेट खुल्यो, आन्द्रा, पाठेघर र मूत्र थैली सँगै जोडिएको थियो। उनी भन्छिन्, “एक पटक जब हामी यस चरणमा सफल भयौं र गर्भाशयमा पुग्यौं, हामीले बच्चालाई आमा बाट एक एक गरी अलग गर्यौं। धेरै रगत नबगाेस् भनी सावधान रहनु पर्ने आवश्यकता थियो।”
‘सात सन्तान जीवित रहनु चमत्कार हो’
‘पहिले मेरो एउटा ठूलो शल्यक्रिया भएको थियो जसमा मैले तीन सन्तान जन्माउन मद्दत गरेको थिएँ।’,उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले मलाई यसमा केही अनुभव थियो, तर यो तीन भन्दा बढी बच्चाहरुको जन्ममा सहयोग गर्ने मेरो पहिलो अनुभव थियो।’
उनले थप्दै भनिन्, ‘मलाई यो अनुभव भएको छ कि अल्ट्रासाउन्डले प्राय बच्चाहरुको सही संख्या दिँदैन, यसैले हामी आफैंले ६ जना बच्चाहरुको अनुमान लगायौं। किट पनि छ जना बच्चाहरुको लागि तयार गरिएको थियो। तर पछि थाहा भयो कि बच्चाहरु सात छन्।
सामान्यतया, यस्ता घटना कमै हुन्छन् जसमा सबै बच्चाहरु जीवित रहन्छन।
बच्चाहरुलाई अस्पतालको नर्सरी र आमालाई आईसीयू वार्डमा सारिएको छ, जहाँ बच्चा र आमाको अवस्था स्थिर छ। बच्चाहरु समय भन्दा पहिले जन्मिन्छन् त्यसैले उनीहरुलाई केही दिनको लागि नर्सरीमा राख्नु पर्ने हुन सक्छ।
लागुऔषधको कारण एक भन्दा धेरै बच्चाको जन्म
डाक्टर हिना फयाज भन्छिन् कि ती महिलाले गर्भधारणका लागि लागुऔषधको प्रयोग गरिन्।
‘ड्रग्सको उपयोगको कारण, एक महिलाको शरीरमा एक भन्दा बढि अण्डा परिपक्व हुन्छ, जसको कारण दुई वा धेरै गर्भावस्था एकै समयमा हुन सक्छ।’ ,उनी भन्छिन्, ‘हामी विश्वास गर्छौं कि यस महिलाले गर्भावस्था औषधिको उपयोगको कारण एकैचोटि सात बच्चाहरुलाई जन्म दिए, जसको कारण धेरै गर्भावस्था रोकिएको थियो।’
उनले भनिन्, ‘महिलाहरु यस्तो अवस्थामा धेरै सावधान रहनु पर्छ। एक विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाहमा मात्र औषधि को उपयोग गर्नुहोस्। यो महिला र उनको बच्चाहरु भाग्यशाली थिए, तर सबै भाग्यशाली हुँदैन्।”
डाक्टरले मृत घोषित गरेर फ्रीजमा राखेको व्यक्ति ७ घण्टापछि जिउँदै !
धेरै महिलासँग शारीरिक सम्पर्क राख्दा यी कलाकार बिरामी
बेहुलीको पोशाकमै छात्रा परीक्षा हलमा प्रवेश गरेपछि…
सडकमा यसरी भयो नोटको वर्षा, सर्वसाधारणले खुशी हुँदै उठाए चाहिएजति पैसा ! (भिडियो)
‘मृतक’को पोस्टमार्टम गर्ने बेला जब सास चल्यो